ထိုင်းဟာ ဆေးခြောက်ကို ပထဆုံး ခွင့်ပြုတဲ့ အာရှနိုင်ငံ ဖြစ်လာဖွယ်ရှိ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး ထိုင်းဟာ ဆေးခြောက်ကို ပထဆုံး ခွင့်ပြုတဲ့ အာရှနိုင်ငံ ဖြစ်လာဖွယ်ရှိ
Alberta is poised to see cannabis asamajor industry an opportunity for economic diversification. Less then 8 weeks remain untill the legalization of recreational marijuana use in Canada. July 2018 was the initial legalisation date, however, provinces and territories, who are responsible for drafting their own rules regarding marijuana sales, have asked for an additional 8 to 12 weeks after the Senate approval to transition to the new framework. In Alberta, private retailers will sell cannabis to those wanting to purchase in-person with online sales that are government-operated. On Wednesday, August 29, 2018, in Edmonton, Alberta, Canada. (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)
ထိုင်းဟာ ဆေးခြောက်ကို ပထဆုံး ခွင့်ပြုတဲ့ အာရှနိုင်ငံ ဖြစ်လာဖွယ်ရှိ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဆေးဝါးနဲ့ သုတေသန လုပ်ငန်းတွေအတွက် ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးမှုကို တရားဝင် ခွင့်ပြုသွားဖွယ်ရှိရာ အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာ ဆေးခြောက်ကို တရားဝင် စိုက်ပျိုးခွင့်ပေးတဲ့ ပထမဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကနေဒါ၊ သြစတေးလျ၊ အစ္စရေးနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်နယ် ထက်ဝက်ကျော်မှာတော့ ဆေးခြောက်ကို ဆေးဝါးနဲ့ သုတေသနအတွက် ခွင့်ပြု လက်ခံထားကြပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် ဂရဲန်းဒ်ဗျူး သုတေသန အဖွဲ့ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ လာမယ့် ၂၀၂၅ ခုနှစ်မှာ ဈေးကွက်အတွင်း စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကနေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၅ ဒဿမ ၈ သန်းအထိ ရရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အကန့်အသတ်နဲ့သာ အသုံးပြုရမယ့် ဥပဒေ မူကြမ်းကိုတော့ လွှတ်တော်ကို တင်ပြထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုငျးဟာ ဆေးခွောကျကို ပထဆုံး ခှငျ့ပွုတဲ့ အာရှနိုငျငံ ဖွဈလာဖှယျရှိ
ထိုငျးနိုငျငံမှာ ဆေးဝါးနဲ့ သုတသေန လုပျငနျးတှအေတှကျ ဆေးခွောကျစိုကျပြိုးမှုကို တရားဝငျ ခှငျ့ပွုသှားဖှယျရှိရာ အာရှနိုငျငံတှထေဲမှာ ဆေးခွောကျကို တရားဝငျ စိုကျပြိုးခှငျ့ပေးတဲ့ ပထမဆုံးနိုငျငံ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ကနဒေါ၊ သွစတေးလြ၊ အစ်စရေးနဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ ပွညျနယျ ထကျဝကျကြျောမှာတော့ ဆေးခွောကျကို ဆေးဝါးနဲ့ သုတသေနအတှကျ ခှငျ့ပွု လကျခံထားကွပါတယျ။
အမရေိကနျနိုငျငံ အခွစေိုကျ ဂရဲနျးဒျဗြူး သုတသေန အဖှဲ့ကတော့ ထိုငျးနိုငျငံအနနေဲ့ လာမယျ့ ၂၀၂၅ ခုနှဈမှာ ဈေးကှကျအတှငျး စိုကျပြိုးထုတျလုပျမှုကနေ အမရေိကနျဒျေါလာ ၅၅ ဒဿမ ၈ သနျးအထိ ရရှိနိုငျလိမျ့မယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ အကနျ့အသတျနဲ့သာ အသုံးပွုရမယျ့ ဥပဒေ မူကွမျးကိုတော့ လှတျတျောကို တငျပွထားခဲ့ပွီး ဖွဈပါတယျ။
Previous articleကနေဒါ ဆိုင်တွေမှာ ဆေးခြောက် ပြတ်လပ်